Spigit: zinghazi Innovation | Martech Zone
Vidio a si Ogwu, onye kpọsara a jikọrọ ndị na-akwado anyị na Mindjet, mee isi ihe dị na vidiyo a nke a na-agaghị eleghara anya:
Innovation = Echiche + Ogbugbu. Echiche site n'aka ha abụghị ihe ọhụrụ, a ghaghị ime ha.
Echiche kachasị ewu ewu abụghị mgbe niile ezigbo echiche maka nsonaazụ azụmaahịa. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ele ụlọ ọrụ na-eme ka ndị ahịa niile nwee nsogbu naanị iji hụ na azụmaahịa ahụ adaala. Oge ụfọdụ ihe ndị ahịa na-arịọ adịghị mma mbọ ụlọ ọrụ gị na-agba ma ọ bụ merie uru ọnụahịa onye ahịa na-akwụ. The ahịa abụghị mgbe niile nri.
Ndị na-eduga ụwa na-eji Spigit's Enterprise Innovation Platform iji mepụta ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ, belata ọnụahịa ma bulie ndị ọrụ na ndị ahịa. Veragbapụ ndị mmadụ, ebumnuche na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị ọrụ egwuregwu na nnukwu data nchịkọta, Spigit na-enyere ụlọ ọrụ aka ịchọpụta ma mepụta echiche ntụgharị site n'aka ndị ọrụ ha na ndị ahịa ha n'ọtụtụ iji mee ka nsonaazụ azụmaahịa pụta. N'ime ụlọ ọrụ 3000, gụnyere ndị isi na-ere ahịa n'ofe Retail, Ahụike, Ego, Teknụzụ, Gọọmentị, Insurance, Utilities and Pharmaceutical ụlọ ọrụ na-eji Spigit eme ka ihe ọhụrụ bụrụ ọrụ dị oke mkpa, nke a na-emegharị, nke a pụrụ ịkọwapụta na usoro azụmahịa.
Ogwu na-enye ụlọ ọrụ ohere ịhazi na ibute echiche ndị a na-achịkọta iji nweta:
Uto mgbanwe - Mepụta iyi ego ọhụrụ, melite ngwaahịa na ọrụ ma nweta asọmpi asọmpi site n'ime ka ọhụụ bụrụ ọrụ dị oke mkpa, usoro azụmaahịa a na-emegharị na nzukọ gị.
Efu arụmọrụ - Ndi oru gi mara. Chọta azịza ọhụụ maka nsogbu ọdịnala, belata ọnụ ahịa site na usoro ọhụụ na ịhazi ọrụ.
Ọhaneze ROI - Nweta nsonaazụ nwere atụ ma kwado mmekorita ebumnuche iji dozie ezigbo nsogbu azụmaahịa na usoro iheomume.
Soro Ìgwè Mmadụ - Ndị gị mara. Mee ka ndị ọrụ na-etinye aka ma nweta nghọta ndị ahịa bara uru.
Tags: igwe mmaduechicheideationọhụrụMindjetspigit